Feysal Cali Waraabe oo sheegay in Soomaaliya weli ay ku jirto gumeysi shisheeye (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Feysal Cali Waraabe oo sheegay in Soomaaliya weli ay ku jirto gumeysi shisheeye (DHAGEYSO)
Siyaasiga Feysal Cali Waraabe oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay mid kamid ah Idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in Soomaaliya weli aysan ka xuroobin gumeysigii shisheeyaha.
Feysal Cali Waraabe ayaa tilmaamay in la yaab ay ku noqotay in baarlamaanka Soomaaliya uu mooshin ka keeno heshiiskii Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ee dekedda Berbera.
“Baarlamaanka mushaarkiisa la bixiyo, amnigiisa la sugo, muxuu annaga mooshin inaga keenaa, midda kale annaga Soomaaliya maba ka tirsanin” Sidaas waxaa yiri Feysal Cali Waraabe.
Feysal Cali Waraabe ayaa dhanka kale sheegay inay ka fiirsan doonaan wada hadallada ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya, sababtuna waxa uu ku sheegay in Soomaaliya ay gumeysi ku jirto, dowlado badan loo kala qeybin, aysan jirinna wadan mideysan oo lala hadlo.
“War eeg Soomaaliya Keating iyo qolyo kale baa gumeysta, kuwaan baarlamaanka isku sheegaya haddii ay halkaan yimaadaan waan xir xirnaa, Berberana maba tagi karaan”
Wareysiga Feysal Cali Waraabe oo dhinacyo badan taabanaya, ayuu sidoo kale kaga hadlayaa kulan dhawaan ay magaalada Hargeysa kula yeesheen Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobey Soomaaliya Michael Keating.